धोनीलाई हारको 'भिलेन' बनाइँदै, एम. एस. बिना यसकारण अधुरो लाग्नेछ टीम भारत
इंग्ल्यान्डमा जारी क्रिकेट विश्वकपमा सेमीफाइनलमा भएको खेलमा भारत न्युजिल्याण्डसँग पराजित भएको छ ।
विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डले भारतलाई १८ रनले पराजित गरेपछि भारतको विश्वकप यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । तर, यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भारत हार्नुको मुख्य कारण पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनी भएको भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ ।
धोनीले ७२ बलमा मात्र ५० रन बनाएका थिए । धोनीले लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ त गरे तर जिताउन सकेनन् । हारको सिकार फेरि भारतीय पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनी भएका छन् । धोनीको भूमिकाको विषयलाई लिएर भारतका मिडियामा आलोचना हुन थालेको छ ।
के धोनी सुस्त भएकै हुन् ?
यसअघि पनि भारत र इंग्ल्यान्डबीचको खेलमा पाँच ओभरमा पूर्वकप्तान हुसेन पनि धोनीको खेल देखेर आजित बने । उनले भनेका छन्, ‘धोनी के गरिरहेका छन ? कम से कम उनले कोशिस त गर्नु पर्छ ।’
धोनीको आलोचना अफगानिस्तानको खेलमा पनि भएको थियो । अफगानिस्तानविरुद्ध उनले ५२ बलमा २८ रन बनाएका थिए । उनको खेलप्रति भारतीय पूर्वखेलाडी सचिन तेन्दुलकरले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसो त अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा धोनी बाहेक अन्य खेलाडीले पनि राम्रो गर्न सकेका थिएनन् ।
इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा भने धोनीले अविजित ३१ बलमा ४२ रन बनाए । जित सम्भव हुँदा हुँदै पनि धोनीले राम्रो नखेलेको उनीमाथि आरोप छ ।
धोनीबिना अधुरो लाग्नेछ विराट कोहलीको टिम
यो महेन्द्रसिंह धोनीको अन्तिम विश्वकप भएको बताइएको छ । सबै भारतीय खेलाडी धोनीलाई सेमिफाइनल र फाइनल जिताएर जितको सम्मान दिन चाहन्थे तर यो सब चकनाचुर भएको छ ।
यसअघि धोनीले आफ्नै कप्तानीमा सन् २००७ को टी २० विश्वकप र सन् २०११ को आईसीसी विश्वकपको उपाधि जिताएर भारतलाई असीम खुशी दिइसकेका थिए ।
विराट कोहली र धोनी
यो विश्वकपमा धोनीको स्ट्राइक रेट ९३ को छ, जसलाई सुस्त मान्न सकिँदैन । अर्थात् प्रत्येक सय बलमा ९३ रन बनाइरहेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त विराट कोहलीलाई थाहा छ कि भारतीय टिममा धोनीको उपस्थितिले मात्रै पनि कति महत्व राख्छ । खेलको दौरान बलरलाई सल्लाह दिन, फिल्डिङ बदल्न र डीआरएस लिन पनि धोनीले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् ।
धोनीको चकित पार्ने फैसलाहरु
धोनीको विकेट किपिङ गर्ने क्षमता वास्तवमै असाधारण र कलात्मक छ । धोनी भारतीय विकेटकिपर मात्र नभई सफल ब्याट्सम्यान र कप्तान पनि हुन् ।
धोनी सधैँ चकित पार्ने निर्णयहरु लिने गर्दछन् । धोनीले बिना कुनै ढिलाइ र नसोचिकन टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी विराट कोहलीको हातमा थमाइदिएका थिए ।
त्यसपछि धोनीले एकदिवसीय क्रिकेट र टी २० बाट कप्तानी छोड्दै टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिए ।
एक कप्तानका रुपमा धोनीले आईपीएलमा चेन्नई सुपरकिंग्सलाई तीन पटक विजेता बनाइसकेका छन् । उनकै कप्तानीमा भारतले पहिलो पटक आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी जित्दै प्रथम पटक आईसीसी टेस्ट वरियतामा भारत पहिलो नम्बर एक भएको थियो ।